झरना, दिपा र रेखामा को जेठी को कान्छी ? « Ramailo छ
झरना, दिपा र रेखामा को जेठी को कान्छी ?
प्रकाशित मिति : Jul 13, 2017
समय : 2:32 pm
रेखा थापा, झरना थापा र दिपाश्री निरौला दर्शक माझ परिचित नाम हो । यी तीन नाममा धेरै कुरा समानता छ भने केही कुराबिच असमानता छ । समानता यो छ कि यी तीनै नेपाली फिल्म क्षेत्रका स्वतन्त्र र स्वावलम्बी महिला पात्र हुन् । फिल्म निर्माण, निर्देशन र अभिनयमा रेखा, दिपा र झरना सक्रिय छन् । फिल्म नगरीमा यी तिनको मित्रता पनि राम्रो छ । यिनीहरु एक अर्कालाई दिदी बिहिनी भनेर सम्बोधन गर्दछन् । तर यी तिनै दिदी बहिनीमा सबैभन्दा जेठी चाहिं र सबैभन्दा कान्छी चाहिं को होलान् त ?
झरना थापा ? होइन, झरना त तीन मध्ये उमेर समुहमा दोश्रो हुंन आउँछिन् । फिल्म ‘दाइजो’ बाट फिल्म यात्रा सुरु गरेकी झरना यतिबेला फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ प्रदर्शनको तयारीमा छिन् । रेखा र दिपामा चाहिं को जेठी को कान्छी होलिन् त ? यी दुईमा जेठी दिपाश्री हुन् भने कान्छी चाहिं रेखा हुन् । फिल्म ‘गाउँले’ बाट हिरोइन बनेकी दिपाश्री टेलिफिल्म हुँदै फिचर फिल्म निर्माण र निर्देशन अगाडी बढिरहेकी छिन् । दिपाश्री यतिबेला ‘छक्का पञ्जा २’ को सम्पदानमा व्यस्त छिन् । ‘हिरो’ डेव्यु रेखा भने रुद्रप्रियाको छायाँकनमा व्यस्त छिन् ।